Merchandiser - Male (10) Posts
Merchandising & Promotion ကိစ္စများကို ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Sales Representative - Male (22) Posts
ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ Customer Skill & Interpersonal Skill များနားလည်ပြီး၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူ၊
အသက် (၂၀) နှစ်မှ (၂၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
ညွှန်ကြားချက်များအားအချိန်နှင့် တပြေးညီလိုက်နာဆောင်ရွက် တတ်သူဖြစ်ရမည်။
ဈေးကွက်အခြေအနေအားသုံးသပ်ပြီးအရောင်းမြင့် တက်အောင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရမည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ပြီးအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
Media Marketing Executive -Male/Female(5)Post_
Location in : ပုဇွန်တောင်
– Marketing နှင့်ပတ်သတ်သော Certificate ရှိရမည်။
– Way Plan ဆွဲနိုင်ရမည်။
– အသက် ၂၀ နှစ်မှ ၃၀နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။
– Media လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
Sales Executive - Male/Female (5 Posts)
Assistant Manager - Male/Female(5 Posts)
– Marketing ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ပွဲစီစဉ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Sales Girl - Female (10 Posts)
မှတ်ချက် – အလုပ်လျှောက်လွှာတွင်ဓာတ်ပုံပါပူးတွဲပါရှိရမည်။
Site Admin -Male (5)Post
– အသက် ၂၀နှစ်မှ ၃၀နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
– Site အတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။
Beauty Advisor - Female (10Posts)
– ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
-ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်း မည်သည့်နေရာတွင်မဆို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Finance Manager Male/Female(3)Posts (Salary -USD 1000-USD 1500)
Salary Rang : USD1000-USD 15000
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကုမ္မဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်လိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။
Finance Manager Male/Female(3)Posts (Salary -USD 1000-USD 1500) Mayangone Township
– B com (or) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
– CPA ပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။
– အသက် 25-40 အတွင်းဖြစ်ရမည်။
– English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။
E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com
Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 (ရုံးခန်းလိပ်စာ)– Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊
အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Young business man working together with her colleague on laptop in office. Shallow focus.
Sales Representative -Male /Female (8 ) Post
GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တွင်ရှိသော Trading Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။
1. Sales Representative – Male /Female (8 ) Post – Salary 120000 +++
– အသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ ကြားဖြစ်ရမည်။
– ဆေးဝါးရောင်းဝယ်နိုင်သည့်အတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။
E-mail- gasrecruit.hr6@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com,gasrecruit.hr2@gmail.com
Phone No.- 09-262256668 , 09 977125251, 09 263121101,09-262223783
ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC
ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။(အင်းစိန်လမ်းမပေါ်လှည်းတန်းမှတ်တိုင်အနီး )
Marketing Media Staff - Female (5) posts
Computer (I Office) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Email & Internet ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်၊ English (4) Skills၊ ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Media Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ (၃)နှစ် အထက်ရှိရမည်။
Social Media လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
အသက် (၂၀ နှင့် ၂၅)နှစ်ကြား ဖြစ်ရမည်။ ရုပ်ရည် ပြေပြစ်ရမည်။ အလုပ်ကို အချိန်ပေးလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
NPD Staff (New Product Development ) - Female (5) Posts
Any Graduate၊ Computer (I Office) ကျွမ်းကျင်ရမည်။
အနည်းဆုံး အရပ်အမြင့် (၅)ပေ (၄)လက်မရှိရမည် ၊ ကိုယ်အလေးချိ်န် ပေါင်100-Lb
Email & Internet ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်၊ English (4) Skills၊ (လုံးဝ)ကျွမ်းကျင်ရမည်။
အသက် (၂၅)နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ရမည်။
Sales Representative - Male (25) Posts
Any Graduate၊ အရပ်အမြင့် (၅)ပေ (၅)လက်မ အထက်ရှိရမည်၊ ကိုယ်အလေးချိန် (ပေါင်110-Lb) ရှိရမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ (၂)နှစ် အထက်ရှိရမည်။ Communication & Presentation Skills ကောင်းရမည်။
အသက် (၂၃)နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ ရုပ်ရည် ပြေပြစ်ရမည်။ Calculation Skills ရှိရမည်။
လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ အလုပ်ကို အချိန်ပေးလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ မည်သည့်နေရာ/ဒေသ မဆို သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
Junior Auditor - Male / Female (5) Posts
စီးပွားရေးဘွဲ့ တစ်ခုခုရရှိပြီး LCCI Level (3) အောင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (သို့)
B.com ဦးစားေးပး၊၊ LCCI Level (2) အောင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Computer (Microsoft Office) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ စာရင်းစစ် လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ (၂)နှစ် အထက်ရှိရမည်။
« Previous 1 … 189 190 191 192 193 … 219 Next »